Ithoyizi locansi - Wikipedia
Ukuqoqwa kwamathoyizi ocansi, eJalimane, 2005
Umshini wokuthengisa uthengisa uhla lwamathoyizi ocansi, eNgilandi, 2005
Isihlahla sikaKhisimusi sihlotshiswe ngamathoyizi ocansi, eMilan, e-Italy, ngo-2013
Ithoyizi locansi liyinto noma ithuluzi elisetshenziselwa ikakhulukazi ukwenza lula ukuthokozisa ngokocansi komuntu, njenge- dildo noma isidlidlizi . Amathoyizi amaningi athandwayo ezocansi aklanyelwe ukufana nezitho zobulili zomuntu, futhi angadlidliza noma angadlidlizi. Igama elithi ithoyizi locansi lingafaka futhi izinto zokusebenza ze- BDSM nefenisha yocansi efana namasilingi ; kodwa-ke, ayisebenzi ezintweni ezinjengokulawulwa kokuzalwa, izithombe zocansi, noma amakhondomu . Ezinye izinkulumo zifaka ithoyizi labantu abadala kanye nensiza yomshado ehlelwe yisikhathi, yize "usizo lomshado" lunomqondo obanzi futhi lusetshenziswa ezidakamizweni namakhambi athengiswa ngenhloso yokuthuthukisa noma ukwelula ucansi. Amathoyizi ocansi athengiswa kakhulu esitolo sezocansi noma ku-inthanethi, kepha futhi angathengiswa esitolo samakhemisi / samakhemikhali, esitolo sezithombe zocansi, esitolo esikhulu noma esitolo somnyango. Amathoyizi anamuhla ocansi ayatholakala cishe kuwo wonke amazwe abesilisa nabesifazane.
1.1 I-electrostimulation engathandeki
1.2 Ifenisha evusa inkanuko
1.3 Amathoyizi ajwayelekile okungena
1.3.1 Amathoyizi anal
1.3.2 Amathoyizi ocansi engilazi
1.4 Amathoyizi wezingono
1.5 Amathoyizi kaPenile
2.1 IGrisi yasendulo
I-electrostimulation engathandeki[hlela | Hlela umthombo]
Enye indlela yamathoyizi ocansi abesilisa nabesifazane yilezo ze- electrostimulation evusa inkanuko . I-erotic electrostimulation isho isenzo sokusebenzisa ugesi ukukhuthaza ezocansi. Maphakathi nawo-1970, imishini yezokwelapha ye-transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) yayitholakala kabanzi. Imishini isebenza ngokuvuselela ukuphela kwezinzwa ngogesi, ithumele izimpawu zokuvuselela ebuchosheni.I-Electrostimulation isebenza ngalesi simiso esifanayo, lapho ubuchopho buthola isignali yokuvuselela ezithweni zangasese, kukhishwa ama-hormone wobumnandi.
Ifenisha evusa inkanuko[hlela | Hlela umthombo]
Ifenisha evusa inkanuko iyifenisha eyakhelwe ngokukhethekile induduzo, amazinga wokungena,nokukhuthaza. Eyaziwa nangokuthi ifenisha yocansi, yinoma yiluphi uhlobo lwefenisha olungaba lusizo emisebenzini yezocansi . Yize cishe noma yini ingasetshenziselwa le njongo,ifenisha evame kakhulu esetshenziselwa ezocansi umbhede, kepha osofa namasofa beza ngomzuzwana osondele.Le akuyona ifenisha evusa inkanuko,ngoba ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko akuyona inkanuko.
Ifenisha eklanyelwe ngokukhethekile ngezinjongo zobulili ingafaka
Amadivayisi wokushaya nokushaya amafulegi afana neBerkley Horse
Amadivayisi wokusebenzisa amandla adonsela phansi ukusiza ekwenziweni kothando ngaphandle kokusebenzisa izilingi eziyinkimbinkimbi
Izinhlobo ezahlukahlukene ze-angled foam wedges noma imicamelo eklanywe ngokukhethekile esekela izikhundla ezahlukahlukene zocansi, isb. Liberator Shapes noma i-ergonomically based Lovebumpers
Amathoyizi ajwayelekile okungena[hlela | Hlela umthombo]
Uhlobo lwamabhola ka-Ben Wa
Amabhola kaBen Wa ayizigaxa zensimbi eziyize ezifakwe ngaphakathi kumuntu wesifazane ezingagqokwa ngaphakathi esithweni sangasese isikhathi eside. Ukuqengqeleka kwangaphakathi kuthiwa kukhulisa ama-orgasms.
I- dildo iyidivayisi engadlidliziyo esetshenziselwa ukukhuthaza ucansi lwesitho sangasese sowesifazane noma sendunu. Ama-Dildos ngokuvamile enziwe nge-silicone rubber, kepha angenziwa ngezinye izinto ezifana nezinsimbi zomzimba eziphephile ezifana ne-titanium, insimbi engagqwali, i-aluminium noma ingilazi. Zivame ukwenziwa zifane nepipi, noma ngabe ezinye zimise okwenziwe nge-C noma zimise okwama-S kwe-G-spot noma i-P-spot stimulation.
I- dildo yokungena kabili iyidayi ende ende, evamise ukuguquguquka enezinhlangothi zombili ezenzelwe ukungena. Ivumela ukungena phakathi kwabantu ababili (noma ukungena kabili kowesifazane oyedwa, kokubili nge-anally nangaphandle).
I- strap-on dildo yisigqoko esigqokwa ngehhanisi, esisetshenziselwa ukungena komunye umuntu.
Isicathulo sehhashi ithoyizi locansi elingadlidlizi, elibunjwe ngokufana nehhashi, elifakwa esithweni sangasese nasendunu ngasikhathi sinye. Yenziwe ngamapulasitiki athambile.
I-Kegel exerciser, eyaziwa nangokuthi i-barbells yesitho sangasese sowesifazane, amaqanda, noma ama-jugglers, yenzelwe ukuthuthukisa ithoni yemisipha esinqeni se-pelvic, futhi ingasetshenziselwa ukuthokozisa ngokocansi kanye nokwenza ngcono ukuphendula kwesitho sangasese sowesifazane.
Umshini wezocansi yinto eqhutshwa yimoto ehlanganisa ukungena nokunyakaza okujikelezayo noma okubuyisanayo, noma kokubili.
Amathoyizi anal[hlela | Hlela umthombo]
Amapulaki amabili ezinqa
Ama-plugs ama-Butt avame ukuba ama-dildos amafushane enzelwe ukufakwa kwe-anal. Bajwayele ukuba nesisekelo esivulekile sokuvimbela ukuthi idivayisi ingamunceki kunxande.
Ama-massager ama-Prostate ngamadivayisi aklanyelwe ukuvuselela indlala yomuntu wesilisa ngempilo nenjabulo.
Amathoyizi ocansi engilazi[hlela | Hlela umthombo]
Amathoyizi ocansi engilazi avame ukwenziwa ngengilazi ye-borosilicate ecacile yezokwelapha ("ingilazi elukhuni"). Lolu hlobo oluthile lwengilazi ethintekayo yokuphepha alunabo ubuthi futhi luzomelana namazinga okushisa aqine kanjalo nokushaqeka emzimbeni ngaphandle kokuyekethisa ubuqotho balo.
Ukukhethwa kwale nto esezingeni eliphakeme kunikeza ukuphepha okusetshenziswayo kanye nenketho yokushisa noma yokushisa amakhaza amathoyizi. Ingilazi ye-Borosilicate nayo ayinayo futhi ingenziwa inzalo ukusiza ukuvimbela ukutheleleka ngokusetshenziswa kabusha. Amathoyizi engilazi asezingeni eliphakeme kakhulu angafakwa ngisho nasemshinini wokuwasha izitsha okwenza kube lula ukuzigcina zihlanzekile. Kanye nezimfanelo zabo ezingokoqobo, iphuzu eliyinhloko lokuthengisa lamathoyizi ocansi engilazi ukukhanga kwabo okubukwayo.
Amanye amathoyizi ocansi engilazi ayazamazama. Kunezindlela ezimbili eziyinhloko lokhu okungatholakala ngazo. Kuphakathi kokuthi ithoyizi lingaba nomgodi lapho kungafakwa khona isidlidlizi esincane senhlamvu, noma umongo wedizayini yengilazi ungashintshwa ukuze wakhe isidlidlizi esijwayelekile. Inketho yokugcina imvamisa inesigqoko sepulasitiki esimboza igumbi lebhethri, elizophinde libe nezinkinobho zokulawula noma amaswishi.
Ama-vibrator[hlela | Hlela umthombo]
Ama-vibrator amabili esitolo socansi
Isidlidlizi Semibhangqwana: Iringithoni Yothando
Ama-vibrator amathuluzi kagesi ahamba ngogesi ahloselwe ukukhuthaza umzimba ngokwakha umuzwa wokushaywa noma wokubhaza. Ama-vibrator eza ngobukhulu bobukhulu nosayizi, ngokusetshenziswa kwangaphakathi noma kwangaphandle. Amanye ama-vibrator enzelwe ukusetshenziswa kwangaphakathi anomumo wobudoda . Ama-vibrator amancane angahle abe nokunamathiselwe kwe-loop okunwebekayo okusetshenziswa njengethoyizi lomunwe noma iringi yeqhude . Ama-vibrator angena ngokuvamisile alinganisa amasentimitha ayishumi nambili kuya kwayishumi nesishiyagalombili (ama-intshi ayisihlanu kuye kwayisikhombisa) ubude namasentimitha amabili kuya kwamahlanu (i-intshi eyodwa kuya kwamabili) ububanzi kaningi ukulingisa ubukhulu bendoda yomuntu ojwayelekile.Template:Ifsubst
Ama-vibrator we-anal aklanyelwe ukufakwa ku-rectum, engahle ivuse i- prostate emadodeni. Eziphephe kakhulu zinesisekelo esine-flared esihlala ngaphandle komzimba, esivimbela ithoyizi ukuthi lingabuyiseki.
Ama-vibrator enhlamvu amancane, ama-vibrator amise okwenhlamvu angasetshenziselwa ukukhuthaza ngqo noma ukufakwa kwamanye amathoyizi ezocansi ukukhuthaza ukukhuthazeka. Amanye athengiswa ngamaluphu anwebekayo wokunamathiselwa njengethoyizi lomunwe noma iringi yeqhude.
Ama-vibrator we-G-spot agobile ngakolunye uhlangothi ukwenza lula ukuvuselelwa kwe- G-spot yabesifazane.
Ama-vibrator we-P-spot agobile ngakolunye uhlangothi ukwenza lula ukuvuselelwa kwe- P-spot yesilisa.
Ama-vibrator okunethezeka agxile kakhulu ekwakhiweni nasekusebenziseni izinto ezibizayo ezikhanga emakethe yezemfashini esezingeni eliphezulu kakhulu.
Isidlidlizi sonogwaja, okuhlukahluka kuso okuningana, iyithoyizi lowesifazane elidumile lezocansi elithandwa kakhulu nguchungechunge lwethelevishini iSex and the City . Iqukethe i-shaft engafakwa evame ukusebenza ngokungeziwe, njengokujikeleza kanye nobuhlalu bangaphakathi noma isenzo esikhanyayo. Okunamathiselwe kushaft kuyisidlidlizi clitoral stimulator. Kwabaningi abadlidliza onogwaja lokhu kuza ngesimo "sezindlebe zonogwaja" ezihlala ohlangothini ngalunye lwe- clitoris .
Ama-vibrator wands, afana ne- Hitachi Magic Wand, angama-vibrator amakhulu ngokuvamile axhumeka esitolo sikagesi (uma kuqhathaniswa nokusebenza kwamandla ebhethri) futhi avame ukuthengiswa njengama-massager emuva.Bayakwazi ukukhiqiza ukudlidlizela okunamandla amakhulu kunama-vibrator amaningi anikwe amandla ngebhethri.  Okunamathiselwe okuhlukahlukene okwenziwe nge-silicone noma okokusebenza kwenjoloba kuvumela ithoyizi ukuthi lisetshenziswe ngokungena, noma linikeze ithoyizi ukuthungwa okuthakazelisa ngokwengeziwe. 
AmaSybia izidlidliza ezinendawo ezimbili ngendlela yesikhuthazi se-clitoral kanye ne-stimulator yesitho sangasese sowesifazane, eklanyelwe ukuvuselela lezi zindawo ezimbili ezinobungozi ngasikhathi sinye nangokuzimela.
I-Womanizer: i-clitoral stimulator isebenzisa ukudlidliza komoya nokumunca.
Amathoyizi wezingono[hlela | Hlela umthombo]
Izibopho zezingono ziyizigaxa ezisetshenziselwa ukuvuselela izingono ngokusebenzisa ingcindezi eyahlukene.
Amadivayisi okumunca imvamisa angaba injoloba noma ingilazi.
Amathoyizi kaPenile[hlela | Hlela umthombo]
Ama-Dildos ngandlela thile abekhona kakhulu emlandweni. Izinto zobuciko ezivela ku- Upper Paleolithic zohlobo olubizwa nge- bâton de commandement kucatshangwe ukuthi zisetshenziselwe izinhloso zocansi.  Bambalwa abavubukuli abathatha lezi zinto njengamathoyizi ocansi, kepha isazi semivubukulo uTimothy Taylor ukubeka, "Uma ubheka ubukhulu, ukuma, futhi — kwezinye izimo - okuwuphawu olucacile lwamabhande we-ice age, kubukeka kungenangqondo ukugwema ukutolika okusobala nokuqonde kakhulu. Kepha kugwenyiwe. "  
IGrisi yasendulo[hlela | Hlela umthombo]
Owesifazane ophethe i-dildo. Isibalo esibomvu i- amphora kukhonjwe yiFlying-Angel Painter c. Ngo-490 BC; ICity of Paris Museum of Fine Arts
I- strap-on dildo esetshenziswa ngabesifazane ababili. I-Lithograph evela ku- De Figuris Veneris (1906) ngu- Édouard-Henri Avril
Ama-dildos amaGrikhi ayevame ukwenziwa ngesikhumba esigxishwe uboya ukuze sibunikeze ngamazinga ahlukahlukene okushuba nokuqina. Babevame ukugcotshwa ngamafutha omnqumo, futhi basetshenziselwe ukwenza ucansi neminye imisebenzi. AmaGrikhi nawo ayengamaqembu okuqala ukusebenzisa igama elithi "ithoyizi" uma kubhekiswa kudilidi. UDildos angabonakala kwezinye zezibonelo zobuciko be- vase yasendulo yamaGrikhi . Ezinye izingcezu zibonisa ukusetshenziswa kwazo eqenjini lezocansi noma ekushayeni indlwabu yabesifazane bodwa.Omunye umkhumbi, cishe wekhulu lesithupha BCE, uveza indawo lapho owesifazane egoba khona ukuze enze ucansi lomlomo endodeni, kuyilapho enye indoda isizofaka idilidi endunu yayo .isitolo.
UPage DuBois, ongumbhali wezinto zakudala nowesifazane, uphakamisa ukuthi ama-dildos ayekhona kwezobuciko bamaGrikhi ngoba imicabango yakudala yamaGreki yakuthola kunzima ukukhulelwa ucansi lwenzeka ngaphandle kokungena. Ngakho-ke, ukushaya indlwabu kwabesifazane noma ucansi phakathi kwabesifazane kudinga ukuthi kusetshenziswe i-phallus yokufakelwa. Ama-dildos amaGrikhi ayevame ukwenziwa ngesikhumba esigxishwe uboya ukuze sibunikeze ngamazinga ahlukahlukene okushuba nokuqina. Babevame ukugcotshwa ngamafutha omnqumo, futhi basetshenziselwe ukwenza ucansi neminye imisebenzi. AmaGrikhi nawo ayengamaqembu okuqala ukusebenzisa igama elithi "ithoyizi" uma kubhekiswa kudilidi.
Ezincwadini[hlela | Hlela umthombo]
UDildoes kukhulunywa ngaye kaningana kumdlalo wamahlaya ka- Aristophanes wango-411 BCE, eLysistrata .
Futhi-ke, mantombazane, lapho kufika isikhathi sokubhanqa… hhayi ukunqaba okuncane kunakho konke, akunjalo? Kusukela ngesikhathi labo baseMilesian besikhaphela, asikwazi ngisho nokuthola ama-dildos esikhumba esineminwe eyisishiyagalombili. Okungenani zizosebenza njengohlobo lokushintshwa kwenyama yomama bethu abampofu… Ngakho-ke! Ungathanda ukuthi ngithole indlela esingayiqeda ngayo le mpi?
Herodas play 'iDemo yamahlaya, lwe-Mime VI, kulotshiwe 3rd Century BCE, imayelana owesifazane othile wasishayela ucingo Metro, ukukhathazeka ukuthola esivela kumngane muva lapho yena aluthola dildo.
Ngiyakuncenga, ungaqambi amanga,
othandekayo uCorrioto: ngubani indoda eyayikuthungatha leli dildo elibomvu elikhanyayo?
Ekugcineni uthola ukuthi umenzi abe yindoda ebizwa ngokuthi yiKerdon, ofihla ukuhweba kwakhe ngaphambili kokuba ngumthungi wezinwele,ashiye amfune. IMetro neKerdon ngabalingiswa abaphambili emdlalweni olandelayo ngokulandelana, uMime VII, lapho evakashele esitolo sakhe.
↑ 1.0 1.1 Empty citation (help)
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ithoyizi_locansi&oldid=88524" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-24 uNtulikazi 2021, nge-21:53.